म उसको बिना हराएको छु Martech Zone
बिहीबार, जुन 14, 2007 आइतवार, सेप्टेम्बर 30, 2012 Douglas Karr
उसको चिल्लो छाला, उज्यालो आँखा, नाजुक आवाज ... ओह, म उनलाई कसरी सम्झन्छु। निश्चित छ, कहिलेकाँही उनी बिहान उठ्दिनन् त्यसैले मैले उसलाई ब्लास्टमा हिर्काएँ चिसो हावा… तर जब उनी अन गरिरहेकी थिइन।
आज मैले अन्ततः उनलाई जान दिनु परेको थियो। उनी डाक्टरको लागी छिन्। आशा छ कि तिनीहरूले केहि साधारण शल्यक्रिया गर्न सक्छन् र मेरो काखमा उनलाई फिर्ता लिन सक्छन्।
म उनीबिना हराएको छु। चाँडै फिर्ता आउनुहोस्, म्याकबुक प्रो!
मेरो पाठकहरु लाई। कृपया मसँग धैर्य गर्नुहोस् ... म मेरो टेम्प, एचपीको साथ गाह्रो समय बित्दै छु। सास
जुन 14, 2007 मा 11: 23 PM
सुनेर दुख लाग्यो !! =(
जुन 15, 2007 बिहान 6:23 बजे
हे डग, तपाइँ केहि थप पोष्टहरूको लागि रूपक राख्नुहुन्छ, र इम्मा वास्तवमै सोच्न थाल्छ कि तपाइँ दुई बीच केहि भइरहेको छ! मेरो मतलब वास्तविक अर्थमा 🙂
जुन 15, 2007 बिहान 7:16 बजे
हा! मैले तपाईलाई भन्नु पर्छ, AL... यो अचम्मको छ कि हामीले हाम्रो ल्यापटप वरिपरि हाम्रो जीवनलाई कति निजीकृत गर्छौं जब यो हाम्रो व्यवसाय हो! मैले सौभाग्यवश लगभग सबै चीजहरू एक वा अर्को तरिकामा नेटमा ब्याकअप गरेको छु - तर केहि पनि सुविधाजनक देखिँदैन।